Surface ကြိတ်ခွဲစက် - China Surface ကြိတ်ခွဲစက်ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
2000 * 600mm စားပွဲတင်အရွယ်နှင့်အတူ 6020AHR ဟိုက်ဒရောလစ် Surface ကြိတ်စက်အကြီးစားမျက်နှာပြင်ကြိတ်စက်
အမည်: မျက်နှာပြင်ကြိတ်စက်ဗိုင်းလိပ်တံလှည့်နှုန်း: 1450 / 50HZ စားပွဲအရွယ်အစား: 2000 * 600mm X ဝင်ရိုးတန်း: 2150mm Y Axis Travel: 640mm လမ်းညွှန်လမ်း - လျှောလမ်းအရွယ်အစား: 2350 * 5300 * 2400mm အသားတင်အလေးချိန်: 8000kgs 2000 * 600mm ဇယားအရွယ်အစားဟိုက်ဒရောလစ် မျက်နှာပြင်ကြိတ်စက် 6020AHR ၁။ နံရံနှစ်ဖက်ရှိကော်လံဆောက်လုပ်ခြင်းသည်ကြိတ်စက်၏မြင့်မားသောတင်းကျပ်သည့်ပံ့ပိုးမှုကိုပေးသည်။ Closedsteel ကိုယ်ရံတော်သည်ဗိုင်းလိပ်တံနှင့်မော်တာကိုကာကွယ်ရန်တပ်ဆင်ထားပြီးကော်လံအားလုံခြုံစေပြီးလှပစေသည်။ ၂ ။
မော်ဒယ်: 5010MSI ဗိုင်းလိပ်တံလှည့်နှုန်း: 1450rpm / min စားပွဲတင်အရွယ်အစား: 1000 * 500mm X ဝင်ရိုး: ခရီးစဉ်: 1100mm Y ဝင်ရိုး: 540mm လမ်းညွှန်လမ်း: လျှောလမ်းအတိုင်းအတာ: 2970 * 2200 * 2050mm အသားတင်အလေးချိန်: 3900kgs ဟိုက်ဒရောလစ်အော်တိုမျက်နှာပြင်ကြိတ်စက် 5010MSI 1 ။ ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော control panel သည်နှစ်ဖက်လှည့်ဖွဲ့စည်းမှုဖြင့်အော်ပရေတာကိုသင့်တော်သောအလုပ်အနေအထားကိုလွယ်ကူစွာရစေပြီး၊ ၂။ လွတ်လပ်သောဟိုက်ဒရောလစ်ဘူတာသည်လေအေး။ တပ်ဆင်ထားပြီးအပူချိန်သေးငယ်။ တည်ငြိမ်သည်။
Slide Way သတ္တု Universal Cylindrical ကြိတ်စက်သုံးလုံးလက်စွဲစာအုပ် 250m
အမည်: မျက်နှာပြင်ကြိတ်စက်ဗိုင်းလိပ်တံလှည့်နှုန်း: ၂၈၀၀ / ၅၀HZ ဇယားအရွယ်အစား - ၄၆၀ * ၂၀၀ မီလီမီတာ X ဝင်ရိုး - ၅၄၀ မီလီမီတာ Y ဝင်ရိုးတန်း - ၂၄၀mm လမ်းလမ်းညွှန် - လျှောလမ်းအရွယ်အစား - ၁၈၀၀ * ၁၄၀၀ * ၁၇၇၅mm အသားတင်အလေးချိန် - ၁၂၅၀ ကီလိုဂရမ်မြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်စွမ်းဆောင်ရည် - ၀ င်ရိုးလက်စွဲ မျက်နှာပြင်ကြိတ်စက် 250M ၁။ တိကျစွာကြိတ်စက်တွင်ပါ ၀ င်သော Electro ဗိုင်းလိပ်တံသည်ကြိုတင်မြင့်မားသော angular ball bearing အား preload ဖြင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းမှကင်းဝေးသည်။ ၂။ စက်တင်ဘာ၊ စားပွဲနှင့်ကော်လံသည်မြင့်မားသောအဆင့်မြင့်သတ္တုများပုံသွန်းခြင်း၊
အမည်: မျက်နှာပြင်ကြိတ်စက်ဗိုင်းလိပ်တံလှည့်နှုန်း: 1450 / 50HZ စားပွဲအရွယ်အစား: ၁၀၀၀ * ၅၀၀ မီလီမီတာ X ဝင်ရိုးတန်း - ၁၁၀၀mm Y ဝင်ရိုးတန်း - ၅၄၀ မီလီမီတာလမ်းညွှန်လမ်း - လျှောလမ်းအရွယ်အစား - ၂၉၇၀ * ၂၂၀၀ * ၂၀၅၀ မီလီမီတာအသားတင်အလေးချိန် - ၃၉၀၀ ကီလိုဂရမ် ၁၀၀၀ * ၅၀၀mm ဇယားဟိုက်ဒရောလစ်မျက်နှာပြင် ကြိတ်စက် 5010AHR ၁။ နံရံနှစ်ဖက်ရှိကော်လံဆောက်လုပ်ခြင်းသည်ကြိတ်စက်၏မြင့်မားသောတင်းကျပ်သည့်ပံ့ပိုးမှုဖြစ်သည်။ Closedsteel ကိုယ်ရံတော်သည်ဗိုင်းလိပ်တံနှင့်မော်တာကိုကာကွယ်ရန်တပ်ဆင်ထားပြီးကော်လံအားလုံခြုံစေပြီးလှပစေသည်။ ၂ ။
84AHR လက်စွဲမျက်နှာပြင်ကြိတ်ခွဲစက်၊ Horizontal Spindle Surface ကြိတ်ခွဲစက်5*4Spindle Motor
အမည်: မျက်နှာပြင်ကြိတ်စက်ဗိုင်းလိပ်တံလှည့်နှုန်း: ၁၇၅၀rpm / ၅၀HZ ဇယားအရွယ်အစား - ၈၀၀mm ၄၀၀ မီလီမီတာ - X ဝင်ရိုးတန်း - ၈၄၀mm Y ဝင်ရိုးတန်း - ၄၂၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံ: ၅ * ၄ အရွယ်အစား - ၂၂၈၀ * ၂၂၀ * ၂၀၄၀ မီလီမီတာအသားတင်အလေးချိန် - ၃၀၀၀ ကီလိုဂရမ် ၄၆၀ * ၁၅၀ မီလီမီတာဇယားမျက်နှာပြင်။ ရေတိုင်ကီ 618M 2800rpm ပါသောကြိတ်စက် 1။ ဗိုင်းလိပ်တံ၏တင်သွင်းသောအမြင့်ကိုတိကျစွာလိုက်နာပါ။ ၂။ အရည်အသွေးသည်တည်ငြိမ်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုဖြစ်ပြီးထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစျေးကွက်သို့အရောင်းရဆုံးဖြစ်သည်။ ၃။ ကြိတ်စက်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်အထူးပြု။ ၄ ။
818AH Universal Cylindric Auto ကြိတ်စက်၊ Metal Surface ကြိတ်ခွဲစက် ၁၀၀၀kgs Weight Weight
အမည်: မျက်နှာပြင်ကြိတ်စက်ဗိုင်းလိပ်တံလှည့်နှုန်း: ၁၇၅၀rpm / ၅၀HZ ဇယားအရွယ်အစား - ၄၆၀ * ၂၀၀ မီလီမီတာ X ဝင်ရိုး - ၅၁၀mm Y ဝင်ရိုးတန်း - ၂၁၀ မီလီမီတာလမ်းညွှန်လမ်း - လျှောလမ်းအရွယ်အစား - ၁၄၈၀ * ၁၅၀၀ * ၂၀၉၀ မီလီမီတာအသားတင်အလေးချိန် - ၁၀၀၀ ကီလိုဂရမ်မြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောတိကျသောမျက်နှာပြင်။ ကြိတ်စက် 818AH 1. X ၀ င်ရိုးနှင့် Y aixs များသည်အလိုအလျောက်ဖြစ်သည်၊ Z ဝင်ရိုးသည်လက်စွဲဖြစ်သည်။ 2. ကြာရှည်ခံ, မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုကို ဦး ခေါင်း။ 3. qulity ဗဓေလသစ်, အိုမင်းကုသမှု။ 4. ထိုင်ဝမ်အရည်အသွေးမြင့်ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်နှင့်မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်ကြိတ်ခေါင်းကို ...
Blohm ဟိုက်ဒရောလစ်စက်မျက်နှာပြင်ကြိတ်စက် 2800rpm / 50Hz Spindle Rotation Speed
အမည်: မျက်နှာပြင်ကြိတ်စက်ဗိုင်းလိပ်တံလှည့်မြန်နှုန်း - ၂၈၀၀ / ၅၀HZ ဇယားအရွယ်အစား - ၄၆၀ * ၂၀၀ မီလီမီတာ X ဝင်ရိုးတန်း - ၅၁၀mm Y ဝင်ရိုးတန်းခရီး - ၂၁၀ မီလီမီတာလမ်းညွှန်လမ်း - လျှောလမ်းအရွယ်အစား - ၁၅၀၀ * ၁၂၂၀ * ၂၀၉၀ မီလီမီတာအသားတင်အလေးချိန် - ၉၀၀ ကီလိုဂရမ်မြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောတိကျမှုမျက်နှာပြင်။ ကြိတ်စက် 818M ၁။ Flat-V လမ်းညွှန်သည်ကောင်းမွန်သောလမ်းညွှန်မှုအရည်အသွေးရရှိရန် longitudinal and crossway လမ်းစဉ်ကိုအသုံးပြုသည်။ နံရိုးများကိုနောက်ဘက်အတွင်းတွင်ထားရှိပါသည်။
43.3 * 21.26 လက်မခရီးသွားသောဒေါင်လိုက်ဗိုင်းလိပ်တံမျက်နှာပြင်ကြိတ်ခွဲစက် 1450rpm တစ်နှစ်အာမခံ
ခရီးသွားခြင်း - ၄၃.၃ * ၂၁.၂၆ လက်မ MaxDistance - Spindle နှင့် Table ကြားရှိ 700mmmm Vetical Rapid Moving Feed: Axis 180 Z: Motor Rotation Speed ​​- 1450rpm အမည် - Surface ကြိတ်စက် 43.3 * 21.26 လက်မခရီးသွားမျက်နှာပြင်ကြိတ်စက် 1450rpm 5010AHR ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ ၁ ။ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုကို ၂၄ နာရီအတွင်းအဖြေပေးမည်။ ၂။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူ ၂၃ နှစ်တာအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာနည်းပညာအတွေ့အကြုံများရှိပါသည်။ ၃။ ဒေါင်လိုက်ဆုံလည်ကြိတ်ခွဲစက်များကိုစက်ရုံမှမထွက်ခွာမီကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံတွင်စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည်။ ၄ ။
၆၀၀ * ၃၀၀ မီလီမီတာမျက်နှာပြင်ကြိတ်စက်၊ အလိုအလျောက်မျက်နှာပြင်ကြိတ်ခွဲစက်နှင့် Elevating Motor
အခြေအနေ - CNC အသစ်သို့မဟုတ်မ - ပုံမှန်ဗို့အား - ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်ဗိုင်းလိပ်တံ - ၅ * ၄ စားပွဲဝိုင်းအရွယ်အစား - ၆၀၀ * ၃၀၀mm လောင်ဂျီတွဒ်ခရီးစဉ် - ၆၄၀ မီလီမီတာအပြန်အလှန်ခရီးသွားခြင်း - ၃၂၀ မီလီမီတာအမြင့်အကွာအဝေးမှဗိုင်းထွန်းစင်မှအလုပ်ဇယားသို့ - ၅၈၀ မီလီမီတာဟိုက်ဒရောလစ်မော်တာ - ၂ * ၄ လမ်းဖြတ်မောင်း ဒေါင်လိုက်မောင်းနှင်သောမော်တာ: ၀.၀၈ * ၄ ဒေါင်လိုက်မောင်းနှင်မှု - ၀.၁ * ၄ ကြိတ်ခွဲစက် - 5355 * (20-45) * 7127 အရွယ်အစား (L * W * H): 2040 * 1830 * 2090mm အသားတင်အလေးချိန် - 2100kg 600 * 300mm X / Y ဝင်ရိုး motor မျက်နှာပြင်ကြိတ်စက်နှင့်အတူအလိုအလျှောက် Z ဝင်ရိုး ...
2800rpm မျက်နှာပြင်ကြိတ်စက်၊2*2Spindle Motor Head မျက်နှာပြင်ကြိတ်စက်
လည်ပတ်မှုမြန်နှုန်း - ၂၈၀၀rpm သွားလာမှု - ၅၄၀ * ၂၇၀ မီလီမီတာ X နှင့် Y ၀ င်ရိုး - အလိုအလျောက် Z ဝင်ရိုးတန်း - မော်တာအအေးဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းမော်တာ: 0.12 *4အမည် - မျက်နှာပြင်ကြိတ်စက် 2800rpm မျက်နှာပြင်ကြိတ်စက် 540 * 270mm ခရီးသွားခြင်း 2550AHR2*2ဗိုင်းလိပ်တံငါတို့၏အားသာချက် 1 ။ နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်ကျော်စက်မှုလုပ်ငန်းထုတ်ကုန်များအတွေ့အကြုံ။ 2. ISO9001 အခွင့်အာဏာနှင့်အတူအားလုံးမော်ဒယ်များအတည်ပြုခဲ့သည်။ ၃။ ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံနှင့်ပြီးပြည့်စုံသော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသော ၀ န်ဆောင်မှု ၄။ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည် ၂၃ နှစ်ကြာပြည်ပပို့ကုန်အတွေ့အကြုံရှိသည်။ ၅။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ISO: 900 ကိုရရှိသည်။
Axis လေးမျက်နှာပြင်ကြိတ်စက်၊ တိကျသောဒေါင်လိုက်မျက်နှာပြင်ကြိတ်စက်
စားပွဲအရွယ်အစား - ၈၀၀ * ၄၀၀ မီလီမီတာအလိုအလျောက်ဖြတ်ကူးခြင်း - ၀.၁-၁ X နှင့် Y ၀ င်ရိုး - အလိုအလျောက် Z ဝင်ရိုးတန်း - မြင့်တက်သောမော်တာဟိုက်ဒရောလစ်မော်တာ - ၃ * ၄ အမည် - မျက်နှာပြင်ကြိတ်စက် X & Y ဝင်ရိုးသည်အလိုအလျောက်မျက်နှာပြင်ကြိတ်စက် ၃ * ၄ ဟိုက်ဒရောလစ်မော်တာ 84AHR ကုန်ပစ္စည်း အသွင်အပြင်။ ၁ ။ ၂။ ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်သည်စက်၏မြင့်မားသောတိကျမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုသေချာစေသည်။ ၃။ တိကျမှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်သည်အကောင်းဆုံးခွဲဝေမှုကိုရောက်ရှိနိုင်သည် ၄ ။
618M ရေတိုင်ကီရေပြင်ညီကြိတ်စက် 2800rpm ဗိုင်းလိပ်တံလှည့်မြန်နှုန်း
စားပွဲတင်အရွယ်: ၄၆၀ * ၁၅၀ မီလီမီတာအမည်: မျက်နှာပြင်ကြိတ်စက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ - ရေတိုင်ကီအအေးခံစက် - 0.12 *2ဗိုင်းလိပ်တံလှည့်နှုန်း - ၂၈၀၀rpm၊ ဗိုင်းလိပ်တံနှင့်ဇယားကြားအဝေးဆုံး: ၄၁၀ မီလီမီတာ ၄၆၀ * ၁၅၀ မီလီမီတာစားပွဲမျက်နှာပြင်ရေတိုင်ကီနှင့်အတူ 618M 2800rpm ကုန်ပစ္စည်း။ ၁။ ဗိုင်းလိပ်တံ၏တင်သွင်းသောမြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုကိုလက်ခံပါ။ ၂။ အရည်အသွေးသည်တည်ငြိမ်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုဖြစ်ပြီးထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစျေးကွက်သို့အရောင်းရဆုံးဖြစ်သည်။ ၃။ ကြိတ်စက်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်အထူးပြု။ ၄ ။